कोरियामा नेपाली कामदारले किन गर्छन् आत्महत्या ? – Online National Network
कोरियामा नेपाली कामदारले किन गर्छन् आत्महत्या ?
१० भाद्र २०७४, शनिबार ०३:३२
काठमाडौं, १० भदौ – पारिश्रमिकका दृष्टिकोणले आकर्षक मानिएकोृ कोरियामा नेपालीले आत्महत्या गर्ने क्रम नरोकिएपछि त्यहाँको रोजगारी चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । आत्महत्या रोक्न गतिलो प्रयास नगरिए कोरियाको रोजगारी नेपालका लागि अर्थहीन हुनेसम्म अनुमान गर्न थालिएको छ ।
कोरियाको विकास र आर्थिक उन्नतिलाई सरसर्ती हेर्दा त्यहाँको रोजगारीप्रति गुनासो गर्ने अवस्था नदेखिए पनि युवकयुवतीले धमाधम आत्महत्या गर्न थालेपछि त्यसको कारण खोजिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत ईपीएस कोरिया शाखाका अनुसार सन् २०१७ को आठ महिनामा कोरियामा १७ नेपालीको मृत्यु हुँदा ४ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । चर्को प्रतिष्पार्धाबीच कोरियन भाषा सिकेर त्यहाँ पुगेका युवाले किन आत्महत्याको बाटो रोज्छन् त ? ईपीएस शाखा प्रमुख बाबुराम खतिवडा भन्छन् – कामदारलाई कोरिया लैजाने छनौट प्रक्रिया नै गलत छ ।
उनका अनुसार थ्री डी (डर्टी, डेन्जरस र डिफिकल्ट) काम गर्न लैजाने कामदार छनौट प्रक्रिया अध्ययन, अनुसन्धान गर्न लैजानेसरहको हुँदा समस्या बढिरहेको हो । ‘घरमा रहँदा खेतबारीमा पाइला नटेकेका युवा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कोरिया जान्छन्,’ खतिवडाले भने, ‘कोरियामा गएर थ्री डीको काम गर्नुपर्दा कैयौं युवाले डिप्रेशन भएर आत्महत्यासम्मको बाटो रोज्न पुग्छन् ।’
शाखाका अनुसार कोरियामा सन् २०१६ मा ११ जना नेपालीको मृत्यु हुँदा तीनजनाले आत्महत्या गरेका थिए । कोरियामा आत्महत्या गर्ने क्रम नरोकिएपछि रोकथामका उपाय सुरु गर्न पीडितले पटकपटक आवाज उठाउँदै आए पनि अहिलेसम्म ठोस योजना बन्न सकेकाे छैन् ।- नागरिक दैनिक